Semalt Expert On How To Prevent Referral Spam Kubva Kukuvadza Your Web Analytics
Webhupu yekuongorora inokosha sezvo inobatsira pakuyera nzvimbo yebasa. Universal Analytics ine zvakawanda zvinoshanda kupfuura yekare Google Analytics uye vashandisi vanofanira kushandisa UA zvakawanda. Zvisinei, kunonoka kushandisa UA ndeyokuti inogamuchira zvakawanda zvekutumira spam. Haisi chikonzero chakanaka chekusavandudza kwairi kunyange zvakadaro. Kana mumwe asingadzivisi spam, inogona kukanganisa zvakanyanya analytics, zvikuru kune SMEs - umzugsservice zug. Lisa Mitchell, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira ( Semalt , anorondedzera kuti ungakunda sei chinotyisa chinotyisa.
Referral spam inofungidzirwa senzira ipi zvayo isiri yevanhu inoshanyira panhoroondo ye analytics. Kuti uongorore nzvimbo yese yekutsvaga, tanga rondedzero yeGoogle Analytics uye sarudza All Traffic kubva kuAquisquis Tab. Kufambisa kwemigwagwa ndeye chikonzero chemarobhoti uye tsvimbo dzinokambaira nzvimbo yacho, kana mabhoti ekutumira matsamba kuUA kugadzira magwaro ekushanyira kusipo.
Sei ichi chiri dambudziko uye nei uchifanira kutarisira
Referral spam inosundira pakuwedzerwa kushanyira kunzvimbo isingaiti. Mhedzisiro ndeyekuti inopisa nemashoko ari mu analytics, uye inoita chifananidzo chakaipa pamusoro pekushanda kwewebsite. Inoguma nepamusoro bounce mitengo uye pasi pekutendeuka kwero.
Ndeipi pfungwa uye nei vachiita izvi?
Chinangwa chekutsvaga kutsvaga ndechokuwana vanhu vasingazivi kuti vashanyire nzvimbo yekutsvaga. Apo ma URL aya ari kuonekwa mumutsara we analytics, anotsvaga chido chemuridzi kuti azive zviri izvo zvavari nazvo izvo zvinoita kuti magwara akawanda. Mumwe haafaniri kumhanyira nzvimbo yavasingazivi. Nzvimbo idzi hadzina kukuvadza sezvavari kungotarisa kuti vawane magetsi uye kusimbisa kutsvaga kwavo. Asi zvakare zvakare, seimwe imwe spam, vanogona kubatanidza zvakare kunzvimbo yakaipa iyo chikonzero nei munhu achida kuvadzivisa zvachose..
Mitemo yekufambisa Spam
Asati aedza kumira kutumira spam, munhu anofanira kunzwisisa maitiro akasiyana-siyana anotora. Izvo zviri zviviri: vafambisi vanoshanyira nzvimbo, uye mabhoti anongotumira mweya mweya. Sezvo vachiita nenzira yakasiyana, vatarisire saizvozvo.
Vanozvishandura sevhesi yepamutemo uye vanotevera hukama nechinangwa chekukamba nzvimbo yacho. Vanowanzouya nenzira yezvirongwa uye vanoedza kushanyira nzvimbo dzose dziri papeji. Vanokambaira zvisiri pamutemo vachawana ruzivo runobatsira kuita kuti web ive nyore kushandisa. Shady crawlers achangobhururuka webhu kuitira kuti vasiye URL yavo kuitira kuti vawane backlink panzvimbo yavo. Dzora izvi uchishandisa iyo .httaccess file kana kuti set custom filter muGoogle Analytics.
Izvozvi mapurogiramu pamwe chete asi zvakasiyana nevane chikwadzi nenzira yavanoita. Pane chirevo chemuenzaniso mu Universal Analytics iyo inoita kuti zvikwanise kuyera uye kuongorora zvinhu zvisina kufanira. Vamwe vanhu vane vavariro dzine utsinye vanoshandisa izvozvi uye vanotumira nhamba dzisina kuwanikwa kuGoogle Analytics ID. Vanokanda zvakanyanya zvavanogona kuti vawedzere mukana wekutora hit. Kana vakagadzirira kuwana, vanoona sekushanyira uye kunosanganisira kutumira nzvimbo yekuvimbisa kuti vamwe vanhu vanotevera zvinyorwa kudzokera kunzvimbo yekutumira.
ome bots itsva ikozvino tumira Analytics Event information. Kuti uone kana chero zviitiko zveMweya zvinoratidzika kumusoro, kuzarura maitiro ezviitiko uye kufamba nenzira yepamusoro wezviitiko zvezviitiko. Iko kuedza kutengesa vashandisi vevanoongorora analytics kuti vashanyire nzvimbo yavo.
Kurwisa Referral Spam
The .htaccess file edit haibatsiri Mweya Referrals uye Ghost Events. Funga izvi mazita uchishandisa zvinyorwa zvinotsika kana zvikamu zvetsika muGoogle Analytics.
Zvinyorwa zveMweya Referrers
Funga nezvechokwadi chokuti mweya vanotumira havazivi kuti webhusaiti yacho ndeyei. Zita remushandi ndiro izvo muenzi anoshandisa kuti asvike pawebsite..Shanduro yezita renzvimbo yepaiti inowanikwa mumushumo weGoogle Analytics. Zvisinei, ghost referrers rondedzero se (haisi kuiswa) kana zita rewebsite. Tsvaga mazita eemazita ose nekuisa nguva yakareba yakadai semakore maviri, chengetedza Technology, uye Network. Chinhu chikuru chinofanira kunge chiri Hostname. Ichadzorera migumisiro ye hosts host dzose dzakashanyira nzvimbo yacho kwemakore maviri apfuura.
Ita runyora rwemazita ose maunoda kubvumidza. Zvadaro uzarura Google Analytics, tungamira kuChikamu chekutonga, uye pasi Pemaonero, tanga pa Mafirimu. Gadzira firiji itsva uye ugozvipa zita idzva rakadai se "Vagari Vagari" uye pasi peFirita yega, siya paMutambo. Sarudza zvinosanganisira uye sarudza mazita ezita muFirimu Munda. Pinda mauto ese anoshanda achiparadzanisa mumwe nomumwe nebar vertical. Chengetedza firiji uye siya "Case Sensitive" checkbox isina.
Paunenge uchiita izvi zvose, iva nechokwadi chokuti une firiji yakasiyana seye "Test" maonero nemashoko ekutenga uye nekuenzanisa.
Wedzera zvikwata kune rumwe ruzha rwaunoda kunge rwakabvisa. Icho chinotevera nenzira imwecheteyo iyo yeMweya Referrers. Misiyano chete ndeyokuti panzvimbo yekuti "Sanganisira," sarudza kusabvisa Mugadziro weCampaign muFiriji yakaiswa. Inyore rwandu rwevashandi vanoparadzanisa nebhokisi.
Vanonyora zvikamu zvavo pachavo ne 100% bounce rates uye peji imwe chete pamusangano. Vanoratidza 100% vashandisi vatsva.
Mafiriji vs. Zvikamu
Mafirimu anochengetedza mamwe mashoko kunze kwemaonero akadaro zvachose. Inongoshanda chete kubvira musi wezvisikwa kusvika kune ramangwana. Kuongorora dhekare dare kunoda kushandiswa kwezvikamu pane.